कमले भन्छन्, ‘ट्रेलर हेरेर फ्यानले चिनेनन्’ « Ramailo छ
कमले भन्छन्, ‘ट्रेलर हेरेर फ्यानले चिनेनन्’
हाल सम्मका फिल्महरुमा ‘भिलेन’ बनेका अभिनेता अनुपविक्रम शाही नयाँ फिल्म ‘कमलेको बिहे’ मा भने विल्कुलै भिन्न भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । फिल्ममा उनले निभाएको शास्त्री युवाको भूमिकाको अहिले चर्चा भैरहेको छ । अभिनेता शाहीले निभाएको उक्त रमाइलो भूमिकालाई लिएर रमाइलो छ डटकमले छोटो कुराकानी गरेको छ :
१.‘कमलेको बिहे’ मा काम गर्ने अवसर कसरी पाउनु भयो ?
मलाई कुनै नँया ‘लुक्स’ मा काम गर्ने मन थियो । त्यसै बेला यस्तो कामको अफर आयो एकदमै खुशी भएँ । फिल्मको अफर चाहिं मलाई डाइरेक्टर साप ‘प्रशन्न पौडेल’ ले नै गर्नु भएको हो । आफ्नो भूमिका र फिल्मको पूरा स्क्रिप्ट चित्त बुझेपछि फिल्म खेल्न राजी भएको हुँ ।
२.‘कमलेको बिहे’ मा तपाईको भूमिका विल्कुलै फरक छ, यस्तो प्रकारको क्यारेक्टरको काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
काम गर्न एकदमै गाह्रो भयो । यो फिल्म गर्दा मैंले काम गरेका अन्य फिल्महरु भन्दा भन्दा डबल गाह्रो भएको छ । अझ हामी त फिल्ममा प्रयोग भएको जस्तो भाषा पनि बोल्न जान्दैनौं । भाषा सिक्न पनि एकदमै गाह्रो भयो ।
३.ट्रेलर रिलिज भएपछि फ्यानको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भयो ?
हैन ! सुरुमा त मलाई उहाँहरुले चिन्नु नै भएनछ । मलाई फोन गरेर खै त तपाई भनेर धेरैले सोध्नु भयो । पछि म त्यहि हो भने पछि आश्चर्य मान्दै राम्रो छ भन्नु हुन्छ ।
४.ट्रेलर हेर्दा तपाईं आफैंलाई चाहिं कस्तो लाग्यो आफु ?
मलाई त रमाइलो नै लाग्यो । मेहनत गरिएको अनुसार फिल्म राम्रो बनेको छ । अहिले हेर्दा खुशी लाग्छ ।
५.फिल्ममा कमले कस्तो पात्र हो ?
कमले एउटा सोझो गाउँले पात्र हो । ऊ शास्त्री पढ्न बनारस गएको हुन्छ । अनि बिहे गर्नको लागि केटीको खोजि गरिरहेको हुन्छ ।
६.फिल्म रिलिज पछि रिजल्ट चाहिं कस्तो आउला ?
रिलिज पछि रिजल्ट राम्रो नै आउँछ भन्ने लागेको छ । किनभने ट्रेलरलाई दर्शकले मन पराउनु भएको छ भने गीत पनि हिट भैरहेको छ । फिल्म राम्रो बनेको छ ।